Articles Archives ⋆ Page4of 86 ⋆ Popular
မေးခွန်း၁။ စာရွက်ပေါ်မှာ ဖောင်တိန်ရဲ့ ရေး ခဲ့တာ ဘာဖြစ်မလဲ၂။ ဂစ်တာကိုင် ဟစ်အော်သီဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ ဘာဖြစ်မလဲ ၃။ ဖဲထုပ်ထဲက လှန်လိုက်တဲ့ ဖဲတစ် ချပ်ဟာ ဘာဖြစ်မလဲ။ . . .
ကျွန်တော် ဂျပန်သို့ တာ ဝန်ဖြင့် ရောက်နေစဉ် ထိုစာစဉ်က လေးများကို ဝယ်ဖတ်ပြီး သဘောကျ သွားသည်။ ပါဝင်ရေးသားသူများမှာ ထင်ရှားသော စာရေးဆရာများ မဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသားများရော လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်နေသူများ ရောပါဝင်ရေးသားကြသည်။ စာက လေးတွေက…
"ရည်းစားစာတွေ ရေးရင်းက စာရေးတတ်သွားပြီး တခြားအလုပ် လည်း မလုပ်ချင်တာနဲ့ ဝတ္တုတိုရေး စားတာပါပဲ''ဟူ၏။ သူတုိ့က ထပ် ကွန့်ပုံမှာ ...''သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြား ဆရာဆိုတဲ့အတိုင်း. . .
ယခုခေတ်လို ပေါက်ပြီးသား သီချင်းကို ဝယ်၍ ဇာတ်ကားနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မသက်ဆိုင် သည်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းခြင်းမျိုး မဟုတ်ချေ။ အမှန်တကယ်တိတိကျ ကျသေသေချာချာ လုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ. . .
မင်္ဂလာတရားတော်ကို ၁၂ နှစ်ကြာ မျှ ကြံစည်တွေးတောပါသော်လည်း မသိနိုင်ကြပါကုန်၊ ထိုမင်္ဂလာတရား ကို ရှင်းလင်းဟောကြားပေး သနား တော်မူပါဘုရား''ဟု လျှောက်ထား လေသည်. . .
"သူ့ကို ကျွန် တော်အားကိုးမှုထားနေတယ်တယ် ဆိုတာ သူသိပါတယ်"တဲ့ "အခုတော့ လေ သူကျောခိုင်းသွားပုံက"ဆိုပြီး ကျွန်တော့် လက်တစ်ဖက်ကိုကိုင် သူတပ်ထားတဲ့ ပါဝါမျက်မှန်အောက် အနားသပ်က စီးကျလားတဲ့ မျက်ရည် စတွေကို. . .
စာ ရေးသူကို အသက် ၆ဝ တစ်ဝိုက်၊ မျက်နှာစိမ်းသုံးယောက်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပေး ပါတယ်။ "သူတို့က ရွှေပြည်သာက ရဲဘော်တွေပေါ့"တဲ့။ စာရေးသူကို တော့ သူက "ဒါက စာရေးဆရာကြူး နှစ်"လို့ပဲ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ သူက…
ဆရာ ကြီးက အစဉ်အဆက်သုံးသော "ကြက်သရေ"၊ "မိုဃ်း"၊ "ဋ္ဌ"တို့သည် မခိုင်မာသော ရေးထုံးများ၊ သန်ရာ ဆွဲ၍သုံးသော ရေးထုံးများဖြစ် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် "ကျက်သရေ"၊ "မိုး"၊ "ဌ"ဟု ပြင်ဆင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အ ထောက်အထားများဖြင့် ပြန်လည်…
သည်ပွဲမှာ ကြက်ကြော်တင်ရ သည့်ရွာက နှစ်စဉ်ကြက်ကြော်၊ ဝက် သားတင်ရသည့်ရွာက နှစ်စဉ်ဝက် သား၊ ငါးကြော်တင်ရသည့်ရွာက ငါး ကြော်ဖြင့်သာ တင်သကြရသည်။ ဇီး တောအမေရေရင်နန်းမှာ နတ်ဝင် သည်များကန္နားပေးကြ၊ နတ်ချင်း များဖြင့် ကပြရာ .…
ဝင် လာသော ကိုအောင်လွင်ကို ကြည့် လိုက်ကြသည်။ ကိုအောင်လွင်က ပြုံး တုံ့တုံ့လုပ်၍ စကားတစ်ခွန်းပြော လိုက်သည်။ "ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဟုတ်ကြီးထင်နေကြတာလား"ဟူ ၍ ဖြစ်၏။. . .